राजधानी काठमाडौको खोलामा २४ किलो माछा ! [ भिडियोसहित ] – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/राजधानी काठमाडौको खोलामा २४ किलो माछा ! [ भिडियोसहित ]
3,997 Less thanaminute
काठमाडौ । नेपालको राजधानी काठमाडौका खोलामा अनौठा दृष्य देखिन थालेका छन् । यहाँका खोलामा अत्यन्तै ठूला माछा फेला पर्न थालेपछि स्थानीयले अनौठो मानेका हुन् । पुसको चीसोमा दिउँसो काठमाडौको धोवि खोलाभित्र केही युवाहरु देखिए । उनीहरुले खोलाको एकतर्फको पानी कटाइरहेका थिए ।
केही जाली लिएर खोलामा पसे । साथमा ड्रम र बोराहरु थिए । केही छिनमा नै मानिसहरुको घुइचो लाग्न थाल्यो । रमितेहरु यति धेरै भरिएकी कुरा प्रहरीसम्म पुग्यो । यति ठूलो भीड किन भनेर प्रहरी नै आइपुग्यो । खोलामा युवाहरुले माछा पक्रिरहेका थिए ।
माछापनि एउटा नै एक केजीभन्दापनि ठूलो भेटिएका थिए । उनीहरुले एकैछिनमा २४ किलो माछा पक्रिए । ड्रममा संकलन गरेर बोरामा हालेर लिएर गए । भिडियो ज्यादै रोचक छ । हेरेर रमाईलो लिनुहोला । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।
आमाले परपुरुषसँग बिहे गरेर जाँदा लागेकी छोरीलाई सानीआमा भन्न लगाउथिइन् (भिडियोसहित)
सम्पत्तीका लागि दिदी भिनाजुले ४० लाख दिएर भाईको परिवार नै सिध्याउने योजना, यसरी खुल्यो रहस्य (भिडियो हेर्नुस्)